21 MAXBUUS OO KU DHINTAY XABSI KU YAALA BRAZIL [FAAHFAAHIN DHEERIYA] | Maalmahanews
21 MAXBUUS OO KU DHINTAY XABSI KU YAALA BRAZIL [FAAHFAAHIN DHEERIYA]
Maalimahanews(Hargeysa):- Ugu yaraan 21 qof ayaa ku geeriyooday dalka Brazil kaddib markii ay isku dayeen in ay ka baxsadaan xabsi ku yaalla dalka Brazil gaar ahaan gobolka Para State ee waqooyiga dalkaasi.
Maxaabiista ayaa walxaha qarxa u adeegsaday darbiga xabsiga iyada oo la tuhmayo in ciidan hubeysan ay taageerayeen baxsashadooda, waxaa kale oo jira in maxaabiista ay hub iyo walxaha qarxa ku dhex heysteen xabsiga.
Markii ay isku dhaceen maxaabiista iyo askarta ilaalada ayaa la sheegay in xabsiga uu u ekaaday goob ay ku dagaallamayaan labo ciidan oo milatari ah,waxaana la maqlayay hub xog leh.
Baadhitaano horudhac ah oo ay samayeen booliska ayey ku sheegeen in ay suuragal tahay in koox hubeysan oo banaanka joogay ay ka shaqeeyeen isku dayga maxaabiista ee ka baxsiga xabsiga,kuwaas oo la xaqiijiyay in ay ku lug lahaayeen dagaalka Maxaabiista iyo ilaalada Xabsiga Para State.
Dalka Brazil waxaa ku xidh – xidhan dad gaadhaya 726,712 oo qof, waxaana ku yaalla xabsiyo dadka ay qaadi karaan ama loogu talagalay ay gaadhayaan 368,000 oo qof.